अनुभब - नारी
सन् १९९८ मा म‘सेन्ट फ्रान्सिस जेभियर यूनिभर्सिटी’ को ‘एक्सटेन्सन डिपार्टमेन्ट’ अन्तर्गत स्थापित ‘सीओएडीवाई इन्टरनेसनल क्यानाडा’ नामक संस्थामा अध्ययनरत थिएँ । मैले सामाजिक विकासमा लागेका व्यक्तिहरूले सामाजिक विकास विषयमा त्यहाँ पढ्ने व्यवस्था रहेको सुनेकी थिएँ । खोजी गरेपछि पत्ता लगाएँ र पत्राचार गरँे । म छानिएर छात्रवृत्ति पाएँ । यो छ महिनाको कोर्स रहेछ । मजस्ता धेरै नेपालीले संस्थाबाट अध्ययन गरिसकेका छन् । त्यसताका नेपालबाट हामी पाँचजना थियांै । साताको अन्तिममा विभिन्न देशबाट आएकाहरू आ–आफ्ना नागरिकसँगै बसी समूहमा आफै खाना बनाएर खाने व्यवस्था थियो । अरुबेला त्यही यूनिभर्सिटीको क्याफेमा खाना खान्थ्यौं । बस्ने होस्टल एक कुनामा, बीचमा खेल मैदान, स्वीमिङ पुल अनि अर्को छेउमा खाना खाने ठाउँ थियो ।विश्वविद्यालयको हाताभरि मेरा छोराहरूको उमेरका विद्यार्थीहरूसँग खाना खाने समय एउटै हुन्थ्यो । ती पश्चिमा केटाकेटी हामीलाई आश्चर्यको भावले हेर्दथे–मानौं यी किन अध्ययन गर्न आएका होलान् ? एकपटक ती विद्यार्थीहरूका कक्षामा मलाई पनि मेरो कामको महिला बचत ऋण समूह र सामुदायिक विकासको अनुभव बताउन लगे । अनौपचारिक किसिमको कक्षामा विद्यार्थी आरामसँग कोकाकोला पिउँदै प्रवचन सुन्दा रहेछन् । अनौपचारिक कक्षाहरूमा त आरामसँग खुट्टा पसारेर लेक्च्ँर सुन्न पाइँदोरहेछ । मनमनै मलाई आश्चर्य पनि लाग्थ्यो । विभिन्न स्थानमा विभिन्न संस्कृति देखियो ।क्यानाडामा केही समय अध्ययन गरेपछि मनमनै ममा पनि यताका मानिसकै शैलीमा यात्रा गर्ने विचार आयो । यही समयमा मलाई अटावा क्यानाडाको राजधानीबाट एक कार्यक्रममा निम्ता आयो । संस्थाले बल्लबल्ल चार दिनको बिदा दियो । त्यसपछि म नोभासक्कासियाबाट अटावा गएँ । कोडी कलेज भएको स्थानबाट पहिले हेलिफ्याक्स जानुपर्ने थियो ।हेलिफ्याक्समा एयरपोर्ट होटलमा बास बस्नुपथ्र्यो । विमानबाट ओर्लेपछि मोटर कुर्न साना–साना काँचका घरमा बस्ने बेन्च राखिएका रहेछन् । म मोटर कुरिरहेको थिएँ । बाहिर चिसो थियो । होटलबाट गाडी आयो, त्यो महिलाले हाँकेकी रहिछन् । उनले मलाई पिकअप गरिन् । होटलको काउन्टरमा पुगेपछि मलाई सोधियो, ‘लगेज आफै कोठामा लिएर जाने कि हामीले ल्याइदिए हुन्छ ।’ मैले भनें, ‘ल्याइदिए हुन्छ ।’होटलमा पुगेर सबैले सामान पठाइदिने भने मैले पनि त्यसै गरेँ । अरूले जे गर्थे, म पनि त्यही गर्थें । बाहिरबाट पो पश्चिमा रहनसहनको कपडा लगाएको थिएँ । पश्चिमा जस्तो देखिएर यात्रा गर्दा सहज होला भनिठानेको मात्र थिए“ । तर, म त नेपालीकदको महिला थिएँ । त्यतातिरका महिलाको जस्तो निर्धक्क सामाजिकीकरण भएको होइन । पहिरन त पश्चिमा लगाएँ तर मेरो जन्मगत अनुहार र छालाको रंग त नेपाली र साउथ एसियननै थियो । मलाई एउटा एयरपोर्ट होटलमा बस्नु थियो, अर्को हवाईजहाजमा उड्न ।नोभास्कोसियाबाट क्यानाडाको राजधानी ओटावा जानु थियो । क्यानाडामा सहरी भागभन्दा बाहिर अग्लोभन्दा पनि जमिनका कारण ५० कोठा भएका होटल पनि एकतले हुने रहेछन् ।होटलको लवीबाट कोठामा पुग्नै पाँच मिनट लाग्ला जस्तो ठूलो होटल थियो । क्यानाडामा मैदानको दुःख नभएको ठाउँ रहेछ । राजधानीबाहिरका प्रान्तहरूमा अग्ला–अग्ला होटलभन्दा पनि फिँजारिएका भवनहरू पनि हुँदा रहेछन् । अब ओछ्यानमा पल्टिएर लगेज कहिले आउला भनेर पर्खिनुप¥यो । धेरै बेरपछि मेरो कोठाको ढोकामा ढकढकको आवाज सुनें । एक जना सातफिट अग्ला मानिस मेरो लगेज लिएर आएका रहेछन् । ढोका खोलेँ, देख्दै डर लाग्यो । मेरो कोठामा लगेज राखिदिएर गए । गर्न त केही गर्ने थिएनन् । तर, मेरो मन भने डरायो । किनकि नयाँ ठाउँ, नयाँ चालचलन । धन्यवाद भन्न पनि भुतुक्कै बिर्सिएँ ।कोठामा लगेज ल्याउने मानिससँग डराउनेले आफै आफ्नो सामान ल्याएको भए त भइहाल्थ्यो । अब पश्चिमा शैलीको भएर भएन, सिको गरेर पनि भएनजस्तो लाग्यो ।भोलिपल्ट नेपाली सारी लगाएँ र नेपाली ढाँचाकै भएँ । मानिसले पनि अर्कै भूगोल कि महिला रहेछन् भनेर राम्रो व्यवहार पनि गरे । मनमा डर पनि थिएन । पश्चिमा मुलुकभित्र एक्लै यात्रा गर्न पनि असहज भएन । अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा भन्दा डोमेस्टिक यात्रा सजिलो भएन, किनकि चालचलन नयाँ थियो । काउन्टरमा व्यागेज पछि पठाइदिए पनि हुन्छ भनेर पहिला कोठामा गएँ । एक घण्टापछि सात फिट अग्लो मानिसले मेरो कोठा नक गरे र मेरो लगेज ल्याए । म पश्चिमा शैलीकी महिला हुन खोजे पनि त्यो संस्कृतिमा नभिजेकी हुँदा अलि–अलि तर्सिएँ ।भोलिपल्ट मलाई ओटावा जान एयरपोर्ट जानु थियो । अब मलाई क्यानाडेलीजस्तो देखिएर नहुने रहेछ भन्ने लाग्यो । अनि नेपाली सारी लगाएँ । लबीमा ट्याक्सी कुरिरहेकी थिएँ । समय ढिला हुन लाग्यो । मसँगै एक अर्को जोडी पनि एयरपोर्ट जान लागेको देखेँ र ती महिलासँग ‘राइड’ मागेँ । यी महिला त नेपाली रहिछन्, हामीसँग ‘राइड’ मागिन् भनेर ती महिलाले उनका श्रीमान्लाई सोधिन् । र, मलाई‘राइड’ दिए । म जे हुँ त्यही रूपमा प्रस्तुत हुँदा मैलै सहयोग पाएर यात्रा सहज भयो ।
प्रतिभा सुवेदी , जेष्ठ ३, २०७९
डर भगाउन बन्जी !
कोरोना महामारीपछि मलाई मानसिक विचलन भैरहेको थियो, सन्त्रास थपिएको थियो । कुनै काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सकेको थिइन । बन्जी गरिसकेपछि नयाँ जीवन पाएको महसुस भैरहेको छ । आत्मबल र ऊर्जा थपिएको छ ।
विद्या राई, कार्तिक १४, २०७८
यो कस्तो हिंसा ?
उसको कुराले मलाई गम्भीर बनायो । यस्तो लाग्यो, कहिलेकाहीं कानून पनि फिक्का हुँदोरहेछ । यो कस्तो हिंसा ? ऐया पनि भन्न नपाउने ।
श्रीजना माली प्रधान , जेष्ठ २५, २०७७
कोरोना जितेकी वृद्धा भन्छिन्, औषधिभन्दा ठूलो आत्मबल रहेछ
नेपालमा छैटौं कोरोना सङ्क्रमितका रुपमा देखिएकी मनकुमारी नेपालमा कोरोना संक्रमणलाई जित्ने तेस्रो व्यक्तिका भएकिछिन् । उनले कोरोना भाइरसको संक्रमण हुदैमा नआत्तिन अन्य सङ्क्रमितलाई समेत सुझाब दिइन् ।
नारी संवाददाता , वैशाख ७, २०७७
कोरोना पीडितको उपचारमा खटिएकी नर्सको दर्दनाक डायरी
जति पनि अस्पतालमा बिरामीहरु आउनु भएको छ, उहाँहरु सुरक्षित हुनुहुन्छ । वीआर गिभिङ आवर बेस्ट । हाम्रो काम नै त्यहीहो, रातदिन हाम्रो ज्यानदिएर हामी बिरामी बचाउन लाग्छौँ । तपाईंहरुले पनि आफ्नो ठाउँबाट हामीलाई सक्दो सहयोग गर्नुहोस् ।
नारी संवाददाता , चैत्र १४, २०७६
आमा बन्ने रहर
आमा बन्नका लागि मन्दिर धाउने, ब्रत बस्ने, भाकल गर्ने मात्र होईन लाखौ खर्च गरेर उपचार गर्ने तथा टेष्टट्युव वेवी समेत राख्ने गरेका प्रसस्त उदाहरणहरु हाम्रो समाजमा छ । तर आमा बन्नका लागि ३–३ महिनासम्म जुम्लिहा गर्भको एउटा बच्चा सकुशल जन्माउने आशामा अर्को मृत बच्चा गर्भमा राखिरहने सहाष (हिम्मत) कमै महिलाले गर्न सक्छन् ।
डा. बालकृष्ण साह, आश्विन २७, २०७६
बलात्कार जीवनको अन्त्य होइन
जब म पेट पाल्न काम खोज्दै थिएँ । त्यतिबेला अछूत भएकै कारण मैले काम पाइन तर मेरो शरीर भोग गर्न र जूठो खान मेरो जात सोधिएन, यस्तो छ हाम्रो समाज । मुनाको प्रश्न छ–बलात्कारमा पर्नेले किन पश्चाताप गर्ने ? बलात्कारी पो दोषी त ? अरूले गरेको नराम्रो कामको प्रतिफल आफूले किन भोग्ने ?
लक्ष्मी भण्डारी थापा, चैत्र १९, २०७५
मानिसहरू विभिन्न काममा व्यस्त हुने भएकाले आफन्त एवं परिवारजनसँग निरन्तर भेट हुँदैन । दसैं सबैसँग भेटघाट गराउने माध्यम बन्छ । सबैसँग भेट हुनु तथा मान्यजनबाट आशीर्वाद थाप्न पाउनु दसैंको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो । अहिले दसैंको नाममा विभिन्न विकृतिसमेत देखा पर्न थालेका छन् । यस्तो देख्दा चाहिँ केही नरमाइलो लाग्छ ।
नारी संवाददाता , आश्विन २६, २०७५
मिडियामा लाग्न घरमा संघर्ष नै गर्नुपर्‍यो
टेलिभिजनबाट टाढिएको वा छोडिहालेको चाहिँ होइन तर चलचित्रमा व्यस्त हुनुपर्ने र अर्काे मनोरञ्जक कार्यक्रम चलाउन व्यस्त हुनुपरेका कारण केही समयका लागि ब्रेक लिएकी हुँ ।
नारी संवाददाता , माघ ७, २०७३
शुक्रबार बलम्बुमा भोज भएकाले म शनिबार पनि उतै थिएँ। शनिबार बहिनी, बहिनीकी साथी र म घर नजिकै फुपूको घर गएका थियौं।
सिर्जना दुवाल श्रेष्ठ, जेष्ठ ६, २०७२
हरेक दिन मेसिनजस्तै व्यस्त हुनुपर्ने यो जीवनमा वर्षमा एकपटक आउने दसैंले नयाँ ऊर्जा थपेको महसुस हुन्छ ।